Weeraro Qorsheysan Oo Ka Dhacay Degmada Baardheera. – Calamada.com
Weeraro Qorsheysan Oo Ka Dhacay Degmada Baardheera.
Wararka ka imaanaya degmada Baardheera ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay weerar ballaaran ku qaadeen saldhigyada ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya ay ka sameysteen garoonka diyaaradaha degmadaasi.
Dagaalka oo bilaawday xalay saqdii dhexe ayaa soo gaaray saaka aroortii kaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadii kala duwan’waxaana dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay gudaha iyo duleedka degmadaasi.
Dad ku sugan Baardhere ayaa sheegay in xalay saqdii dhexe illaa saaka 5:00 aroornimo ay maqlayeen daryanka madaafiicda iyo rasaas ay labada dhinac is dhaafsanayeen’iyadoona si rasmi ah aan loo xaqiijin karin khasaaraha ka dashay dagaalkaasi.
Â Wararka ayaa intaasi ku daraya in duqeyn uu la kulmay saldhigga ciidanka Kenya ay ku leeyihiin agagaarka Buundada degmada Baardheere.
Dhinaca kale sarkaal katirsan maamulka gobolka Gedo ugu magacaaban Xabashida Itoobiya ayaa isku day dil ka badbaaday kadib markii ciidanka Xarakada Al Shabaab ay gurigiisa ugu dhaceen.
Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa baahisayÂ in ciidamada mujaahidiinta ay weerareen guriga Maxâ€™med Xuseen Ganeey oo ku magacaaban Madaxa mashaariicda maamulka dowlada Ridada federaalka ee degmada Baardheere.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 30-07-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 30-07-1437 Hijri.